Akụkọ - Uru na ngwa nke ihe eji eme uzuzu
Powder metallurgy bụ usoro nke ịme ọla ma ọ bụ ntụ ntụ (ma ọ bụ ngwakọta nke ntụ ntụ na nke na-abụghị nke ntụ ntụ) dị ka akụrụngwa, site na ịmepụta na nsị, na-eme ihe ndị e ji ígwè mee, ihe mejupụtara na ụdị ngwaahịa dị iche iche.
Uru nke ntụ metallurgy:
1. Powder metallurgy technology nwere ike belata nkewa nke alloy components ma kpochapụ nkedo, usoro nkedo na-enweghị atụ.
2. Ọ nwere ike na-adị mfe ịghọta multiple ụdị nke mejupụtara na-enye zuru play ka nwoke na àgwà nke ọ bụla akụrụngwa ihe. Ọ bụ teknụzụ dị ọnụ ala dị ọnụ ala maka imepụta ihe eji arụ ọrụ dị elu na seramiiki mejupụtara.
3. Net nso-akpụ na akpaghị aka uka mmepụta nwere ike na-emezu, si otú ahụ belata mbenata oriri nke ihe onwunwe na ume na mmepụta.
4. Ọ nwere ike iji ojiji nke ore, tailings, steelmaking sludge, Rolling ígwè akpịrịkpa na imegharị ihe iji scrap metal dị ka ngwaọrụ. Ọ bụ teknụzụ ọhụrụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na njikwa ihe niile.
5. Ọ nwere ike na-emepụta ihe na ngwaahịa na pụrụ iche Ọdịdị na Njirimara na-apụghị-emepụta site nkịtị agbaze usoro.
A na-ejikarị ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, site na ngwa igwe na-emepụta ngwa ngwa; Site na ngwaike ngwaike na nnukwu ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ igwe; Site na ụlọ ọrụ eletriki ruo n'ichepụta ụgbọ ala; Site na ụlọ ọrụ obodo na ụlọ ọrụ ndị agha; Site na teknụzụ izugbe na teknụzụ dị elu, ntụ ntụ metallurgy enwere ike ịhụ usoro.
Ihe a dị n'elu bụ gbasara njirimara metụtara ya na ojiji nke ngwaahịa igwe eji arụ ọrụ, enwere m olile anya na ozi a nwere ike inyere gị aka ịghọta ngwaahịa ngwaahịa ntụ ntụ.